Isayithicore izisa uLawulo loMxholo kwiiNcwadana eziPrintiweyo | Martech Zone
Umjikelezo wobomi bemveliso yentengiso, oqala ngokuqonda umbono kunye nokwandisa isigaba sokuphuhlisa ukuya kwingxelo yokugqibela, iphepha ledatha, incwadana, ikhathalogu, imagazini okanye nayiphi na enye into eyindinisa kunye nechitha ixesha.
Indawo, inkokheli yentengiso kwisoftware yenkqubo yolawulo lomxholo kwisoftware, ikhuphe itekhnoloji entsha enokubanakho ukuyiguqula le nkqubo yokuprinta izinto. Isitudiyo esiPrinta iStitecore asiboneleli umbutho ngolawulo olungcono kuyo yonke le nkqubo, kodwa sinokunciphisa ixesha lokuphucula ubomi ukusuka kuqikelelo lweentsuku ezingamakhulu amabini ukuya kwezingaphantsi kweentsuku ezingamashumi amabini, kwaye ukusebenzisa izibonelelo ezimbalwa kunangaphambili!
Indawo yokuPrinta yeStudio ukufakela njenge-plug-in kwiAdobe InDesign kwaye iba yindawo ebumbeneyo kuyo yonke imixholo yeAdobe InDesign. Inika iqonga lewebhu ukudibanisa abayili bewebhu, abaphuhlisi, abaphathi beemveliso, abathengisi kunye nabo bonke abanye abachaphazelekayo kweli phulo, ukuququzelela ukusebenzisana kweqela, ulawulo lweelwimi ezininzi, ukhuseleko kunye nolawulo lokuhamba komsebenzi kunye nokuhanjiswa kwamaxwebhu okunamandla.
Abaqulunqi bewebhu bayayilayisha imisebenzi yabo, kubandakanya ubume bamaxwebhu kunye noseto. Isuti ikwatsala umxholo ukusuka kwiNkqubo yokuLawulwa koMxholo weSitecore (CMS) ukuya kwi-InDesign ngqo, kwaye ibonelele ngokufikelela kwi-intanethi kulayini womsebenzi. Abaphathi beemveliso bahlaziya ikhathalogu yonke imihla kwaye benze imijikelezo yokujonga kwakhona. Abangoyilo ngaphakathi kwintengiso, ukuthengisa, inkonzo kunye namanye amasebe afanelekileyo enza ngokwezifiso iimveliso zePDF kunye nokuprinta kulwakhiwo ukupapasha, nangaphandle kolwazi lobuchwephesha bokwenza amaxwebhu e-InDesign.
Ngoyilo kunye nokuprinta imveliso yezinto zentengiso zihlala zenza malunga neepesenti ezingama-30 kuhlahlo-lwabiwo mali lomthengisi, izibonelelo zale teknoloji azidingi kukhankanywa. Ixesha eligciniweyo likwavumela abathengisi ukuba bakhuphe umkhankaso wabo kufutshane ne-real-time, exabiseke kakhulu kukhuphiswano olunamandla nolunamanzi olwanamhlanje apho ukuziqhelanisa nokukhawulezisa ukusebenza sisitshixo sempumelelo.
Zikhuphelele le incwadana esemthethweni okanye ubhalise umboniso kwi-intanethi.
tags: isitudiyo sokuprinta esisebenzayoCMSulawulo lokuqukethweiinkqubo zentengiso yedijithaliindawoizixhobo
Huddle: Intsebenziswano kwi-Intanethi kunye nokwabelana ngeFayile
Umsebenzisi waMandla kuFacebook